Fahafahana miovaova Default Credit Default - World Trade Exchange
horonantsary: ​​ny fomba hanamboarana roi 10,000% ao anatin'ny 90 andro
NY MARKET SWAP DEFAULT DEFAULT NO MPAMORA FAMPIANARANA lehibe indrindra noforonina.
Ny tombontsoa amin'ny fampiasam-bola Unicorn izay manome valiny amin'ny fampiasam-bola amin'ny teboka isan-jato na an'arivony isan-jato dia tena sarotra tadiavina. Na izany aza, ny Credit Default Swap (CDS) dia tsy vitan'ny fampiasam-bola unicorn fotsiny izay manome tombony 10,000% amin'ny fampiasam-bola; io no milina fanararaotana fampiasam-bola lehibe indrindra namboarina, araka ny hitanao amin'ny tantara fahombiazana amina miliara etsy ambany.
Bill Ackman dia nahazo vola efa ho 100 heny tamin'ny $ 27M Credit swap swap izay namoaka $ 2.6B.
Bill Ackman dia miliarderam-bola manda izay nahazo vola mitentina 10,000 100% amin'ny famatsiam-bola (27 heny ny vola azony) rehefa namadika vola mitentina $ 2.6 miliara dolara tao amin'ny Credit Default Swap tao anatin'ny 30 andro izy. Azonao atao ny mamaky ny tantara feno amin'ny tranokala Forbes Eto.
John Paulson dia nanao famerenam-bola 100 heny izay nandoa 15 miliara dolara ho an'ny orinasany sy $ 4B ho fananany tombony.
John Paulson, mpanorina ny Paulson & Company, tahirim-bolam-bato ao New York, dia nanangona vola mitentina 150 tapitrisa dolara tao amin'ny Credit Default Swaps ary nahazoana $ 15 miliara ho an'i Paulson. & Co. Andriamatoa Paulson manokana dia nitondra vola 4 miliara dolara nalaina tamin'ny volany. Ahoana no nanaovany azy? Ny kitapom-bolany nividy findramam-bola dia miverina amin'ny trosa arahin'antoka antoka amin'ny faratampon'ny firoboroboan'ny trano. Niakatra ny sandam-bolan'izy ireo rehefa tonga ny krizy ambony.
Kyle Bass sy ny kitapom-bolany dia nahazo tombony $ 4 miliara tamin'ny fividianana swap default default.
Ny mpamatsy vola malaza Kyle Bass sy ny kitapom-bolany dia nahazo tombony $ 4 miliara tamin'ny fividianana swap default de crédit rehefa nianjera ny tsenan'ny trano noho ny fitotonganan'ny US.
Azonao atao ny mahazo ROI hatramin'ny 10,000% amin'ny alàlan'ny fanangonam-bola ao amin'ny WTE CDS!
Azonao atao ihany koa ny mahazo valiny 10,000% amin'ny fampiasam-bola na vola 100 heny ao anatin'ny 90 andro amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny Credit Default Swap.
Ohatra, raha mampiasa vola $ 100,000 amin'ny swap default default ianao dia hahazo 10 tapitrisa dolara ao anatin'ny 90 andro.
Raha mampiasa vola $ 1 tapitrisa ianao amin'ny fifanakalozana default amin'ny crédit dia hahazo $ 100 tapitrisa ianao ao anatin'ny 90 andro.
Raha mampiasa vola $ 10 tapitrisa amin'ny fifanakalozana default amin'ny crédit ianao dia hahazo $ 1 miliara ao anatin'ny 90 andro.
Azonao atao ny mahazo hatramin'ny ROI 10,000% amin'ny fividianana CDS amin'ny trosan'ny orinasa azonao antoka fa tsy manara-penitra, bankirompitra na hiaina trangan-trosa hafa. Ohatra, andao lazaina fa nanambola $ 100,000 ianao hividianana ny CDS amin'ny trosa $ 10M naloan'ny orinasa ABC an'ny Bank of America satria novakianao tamin'ny vaovao fa eo amoron'ny fatiantoka na manana olana ara-bola ny orinasa ABC. Raha tsy mahavita mandoa zana-bola amin'ny Bank of America ny orinasa ABC dia azonao atao ny manontany WTE hanavotra ny CDS anao amin'ny orinasa ABC. WTE dia handoa anao $ 10 tapitrisa, izay ny vola aloan'ny orinasa ABC. Tamin'ny fampiasam-bola 100,000 10 $ amin'ny CDS amin'ny trosan'ny orinasa ABC dia afaka nahazo $ 10,000 tapitrisa sy zanabola ianao, izany hoe ROI 1%. Ohatra, azonao atao ny mividy CDS $ 100M amin'ny indram-bola $ XNUMXM an'ny orinasa XYZ amin'ny Bank of America. Raha XYZ tsy mahavita mandoa na miala amin'ny findramam-bola, WTE dia handoa anao $ 100M miampy ny zanabola indram-bola.
Azonao atao ny mampiasa vola amin'ny CDS amin'ny trosan'ny orinasa maro araka izay tianao. Tsy misy fetra ny isan'ny orinasa azonao vidiana CDS. Noho izany, afaka mahatratra ROI hatramin'ny 10,000% amin'ny rivotra manify mifototra amin'ny fananan'ny orinasa hafa ianao.
IZAY MAHAY INDRINDRA MIFIDITRA AMIN'NY FIVAROTANA VOLOTRA CREDIT
Tsy mila bankiritra, andrim-panjakana ara-bola, hedge fund ianao hampiasa vola amin'ny Credit Default Swap.
Tsy mila manana ny fiarovana ifotony ianao, manana fifandraisana amin'ny orinasan-tserasera, ary tsy mila miaritra fatiantoka amin'ny tranga tsy mandeha intsony hividianana CDS amin'ny trosan'ny orinasa hafa.
IZAY MAHAY INDRINDRA MIFIDY AMIN'NY FIVAROTANA DEFAULT CREDIT!
Raha toa ka tsy mahavita mandoa ny trosany na tsy mahavita mandoa zanabola ny orinasa irehananao, dia hahazo 100% ny vola omena anao na ny sandan'ny indram-bola amin'ilay vola nindramina.
INONA NO VOAFITRA CREDIT DEFAULT?
INONA NY WTE MIFANDROSO VOAFETRA CREDIT?
WTE credit default swap dia fitaovana ara-bola miaro ny indram-bolanao sy ny fanananao ara-bola hafa amin'ny loza ateraky ny tsy fandoavam-bola, ny tsy fahombiazana, ny fatiantoka, ny fihenan'ny isa na ny trosa, ny fatiantoka ary ny hetsika tsy ampoizina Raha tsy mahomby ny fampindramam-bola sy ny fanananao ara-bola, aza manome ROI, mahazoa fatiantoka, fihenan'ny sandam-bola, na tsy mahomby amin'ny antony rehetra, CDS dia manome antoka fa hahazo 100% ny sandan'ny vola amin'ny fanananao ianao.
Na mendrika $ 10M, $ 100M, $ 100B na mihoatra ny fanananao dia tsy maninona izany. Azonao atao izao ny miverina amin'ny laoniny ary mahazo tambiny feno amin'ny trosanao ratsy, ny fanananao trosa ary ny trosa tsy voangona amin'ny sandan'ny boky amin'ny alàlan'ny famindrana ny trangan-trosa aminao WTE ho takalon'ny premiumy iray. Ny "Default swap premium" dia ny premium (tahan'ny raikitra) izay eken'ny mpividy ny handoa azy WTE ho takalon'ny famindrana ny trangan-trosa.
Ohatra iray amin'ny CDS
Ohatra 1 amin'ny Credit Default Swap
● Ny fahatokisan-tena amin'ny famatsiam-bola dia manana fatiantoka orinasa 500 tapitrisa dolara navoakan'ny orinasa iray tsy miankina.
● Raha misy ny mety hitrangan'ny orinasan-trano tsy miankina amin'ny famerenam-bola, dia mety hividy CDS avy ny fahatokisan-tena amin'ny fampiasam-bola WTE. Ity CDS ity dia mitentina 500 tapitrisa $.
● Ny fahatokisan'ny fampiasam-bola dia handoa zanabola amin'ity Credit Default Swap 1% ity. Mety misy fandoavam-bola $ 5,000,000 isan-taona mandritra ny faharetan'ny fifanarahana.
● Raha toa ka tsy mahomby ny orinasan-trano tsy miankina, dia WTE dia handoa onitra amin'ny banky fampiasam-bola $ 500 tapitrisa - ny sandan'ny Credit Default Swap.
● Noho izany WTE mitaky risika be dia be ary mety handoa 500 tapitrisa $.
Ohatra 2 amin'ny Credit Default Swap
● Alao an-tsaina hoe ny Bank of America dia nampindrana vola tamin'ny GM tamin'ny endri-bola $ 1B.
● Bank of America dia afaka mividy Credit Default Swap avy amin'i WTE.
● Raha toa ka tsy nahomby tamin'ny fampindramam-bola ny GM dia WTE dia handoa ny Bank of America ny sandan'ny indram-bola.
● Araka izany, ny Bank of America dia miaro amin'ny tsy fanefana findramam-bola. WTE manana ny tombony ahazoana tombony raha toa ka tsy mijanona ao anaty indram-bola ny GM.
● Arakaraka ny mampidi-doza ny indram-bola arakaraka ny fividianana Credit Default Swap.
Ohatra 3 amin'ny Credit Default Swap
Tesla dia manome fifamatorana 10 taona, 8% miaraka amin'ny sandan'ny $ 5B amin'ity ohatra ity.
Barclays Bank dia manana vola be loatra amin'ny rano, izay tsy mahazo zana-bola, ka dia nanapa-kevitra ny hividy ny fatoran'ny Tesla izy ireo. Manome naoty BB an'ny Tesla ny masoivohom-bola naoty iray, ka mihevitra ny Barclays Bank fa mahasoa kokoa ny mitady Credit Default Swap avy amin'ny WTE.
Ny fifanarahana an-tsoratra dia milaza fa mandritra ny androm-piainan'ny fifamatorana, ny Banky Barclays dia handoa ny 1% amin'ny sandan'ny tarehy WTE. Ho takalony, WTE dia hanolotra fiarovana amin'ny fanakanana an'i Tesla amin'ny fandoavan-trosany.
Raha toa ka tsy mahomby amin'ny fandoavana trosa i Tesla, dia WTE dia handoa ny sandan'ny indram-bola amin'ny Banky Barclays.
Ohatra 4 amin'ny Credit Default Swap
Nindrana 400 tapitrisa dolara tamin'i Chrysler ny banky iray mandritra ny dimy taona mitaky fandoavana zanabola tsindraindray mitovy amin'ny LIBOR + 2.2%.
Ny politikan'ny banky dia mitaky ny fampindramam-bola rehetra a WTE Credit Default fifanakalozana amin'ny sandan'ny indram-bola indramina. Amin'ity tranga ity, ny banky dia afaka mividy CDS miaraka amina vola 400 tapitrisa $ WTE.
Ny CDS dia mitentina 1%. Ny banky dia tsy maintsy mandoa vola mitovy amin'ny 1% amin'ny sandan'ny notional WTE isan-taona. Ny vola isan-taona dia mitentina 4,000,000 $ (1% × $ 400 tapitrisa).
Raha i Chrysler dia mandaitra amin'ny fandoavam-bola farany ary ny banky dia manangona 50% fotsiny amin'ny fotony, dia azon'izy ireo atao ny mitaky ny tsy itovizany amin'ny WTE. Ny vola horaisin'izy ireo WTE dia manodidina ny 200 tapitrisa $ (400 tapitrisa × (1 - 50%)).
ohatra 5 ny Credit Default Swap
Banky indramina amin'ny orinasa XYZ £ 10B ny orinasa Bank ABC. Bank ABC dia mividy Credit Default Swap avy amin'i WTE.
Raha toa ka miala amin'ny findramam-bola ny orinasa XYZ, dia WTE handoa ny sandan'ny trosa satria WTE niatrika ny risika tamin'ny Credit Default Swap.
Raha tsy miantra amin'ny indram-bola ny Company XYZ, dia WTE hitazona ny vola naloan'ny Bank ABC tamin'ny Credit Default Swap.
Noho izany, Bank ABC dia rakotry ny fifanakalozana default default amin'ny WTE raha tsy mety ny orinasa XYZ.
Ny vola aloa amin'ny CDS dia miovaova arakaraka ny mampidi-doza amin'ny indram-bola. Raha manana isa naoty ratsy ny orinasa XYZ, dia ny premium aloany amin'ny Bank ABC WTE dia ho ambony kokoa.
ohatra 6 ny Credit Default Swap
Ny BP dia manana fatorana 10 taona navoakan'i Shell izay mitentina $ 1,000,000,000 sy tombony $ 100,000,000 isan-taona.
Matahotra i Shell fa tsy hanefa ny adidiny amin'ny fatorana, miditra amin'ny CDS i BP WTE ary manaiky handoa WTE fandoavam-bola $ 20,000,000 isan-taona mifanaraka amin'ny fandoavan-trosa isan-taona ny fatorana.
Ho takalony, WTE nanaiky handoa an'i BP ny sandan'ny $ 1,000,000,000 amin'ny fatorana ankoatry ny zanabola sisa tavela amin'ny fatorana ($ 100,000,000 ampitomboina amin'ny taona sisa tavela). Raha manatanteraka ny adidiny amin'ny fatorana i Shell aorian'ny fahamatorana aorian'ny folo taona, WTE hahazo tombony amin'ny fandoavana $ 20,000,000 isan-taona.
Ohatra 7 amin'ny Credit Default Swap
Raha manahy ianao sao tsy mindrana indram-bola ny mpampindram-bola dia azonao atao ny mampiasa CDS hanonerana na hanovana izany risika izany. Raha te-hiova ny trangan-javatra mety hitranga dia mividy CDS ianao WTE amin'ny sarany 1%. Ho takalony, WTE nanaiky fa - raha toa ka diso ny zavatra navoakan'ny mpampindram-bola na miaina trosa - WTE dia hanome anao ny sandan'ny fiarovana sy ny fandoavam-bola rehetra mety ho nalamina teo anelanelan'ny fotoana sy ny daty fahamatoran'ny fiarovana. Araka izany, WTE dia hanonitra anao raha toa ka diso ny fisamborana (matetika ny sandan'ny tarehin-trosa). Ohatra, raha mividy CDS amin'ny indram-bola $ 1 miliara ianao ary mandiso lalana ny mpitrosa na inona na inona antony. WTE dia handoa anao ny $ 1 miliara sy ny fandoavam-bola rehetra amin'ny vola.
tombony amin'ny fifanakalozana default amin'ny crédit
AMIN'NY BANY SY INSTITUSIANA VOLA
Arovy ny findramam-bola sy ny volanao manohitra ny karazana risika sy trangan-trosa rehetra.
Ny CDS dia manampy anao hamindra ireo loza mety hitranga amin'ny crédit WTE tsy mamindra ny fividianana fividianana na fananana trosa. Araka izany, hiaro ny indram-bola amin'ny bokinao amin'ny loza mety hitranga ianao, ao anatin'izany ny tsy fandoavam-bola, ny tsy fetezana, ny fatiantoka, ny fihenan'ny isa na ny crédit, ny fanafainganana ny adidy, ny fandavana ny asa, ary ny fametraham-pialana. Azonao atao ny manana fiadanan-tsaina amin'ny fahalalana fa voasarona ny risika amin'ny trosa, voaaro ny kaontinao ary azo antoka ny fandoavanao.
Ny CDS dia natao hanaronana loza mety hitranga, toy ny:
1. BANKRUPTCY: lasa tsy mahaleo tena ny orinasan-tserasera na tsy afaka mandoa ny trosany.
2. TSY Fahombiazana handoa: Ny orinasam-pandraisana anjara dia tsy mahavita mandoa zanabola na indram-bola rehefa tokony.
3. FIKAMBANANA TRANO: Ovaina ny fanamboarana ny trosa ka tsy voakitika ilay mpihazona trosa.
4. FAMPANDROSOANA NY FAHAMARINANA NA FAHAMARINANA FAHAMARINANA: Ny adidin'ny trosa dia tsy maintsy alohan'ny datin'ny fahamatorany.
5. REPUDIATION / MORATORIUM: Ny namoaka ny fatorana ifotony (The entity referansa) dia mandà ny trosany, mandà amin'ny fomba mahomby ny fandoavana ny zanabola sy ny lehibe.
Arovy ny fidiram-bolanao, ny onjam-bola, ny tombony ary ny lanjanao
Ny CDS dia miaro anao amin'ny fisorohana ny tsy fandoavam-bola, ny tsy fampiasa, ny tsy fandoavan-trosa, na ny fatiantoka ataon'ny mpitrosa anao sy ny trosa mampidi-doza ara-bola hafa, izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fidiram-bolanao, ny vola miditra, ny vola miditra, ny tombom-bolanao, ny kapitalinao ary ny volanao. Noho izany, ny fampiasam-bola amin'ny CDS dia mety ho fampiasam-bola hendry indrindra azon'ny orinasanao atao mba hiarovana ny fidiram-bolany, ny tombony, ny vola mivoaka, ny renivola ary ny tariby.
HAMPITARARA NY FITIAVANA, NY VAROTRA SY NY OVERIN'NY MODY
Tsy ny CDS ihany no miaro anao amin'ny loza ateraky ny tsy fandoavam-bola, fa ny CDS koa dia hamela anao hampihena ny tahiry trosanao ratsy. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tahirin'ny trosanao ratsy dia azonao atao ny mandray ny tahiry trosa ratsy tafahoatra amin'ny fidiram-bola (amin'ny alàlan'ny fanomezana kely dia kely kokoa), izay midika vola bebe kokoa amin'ny famerenam-bola, fanatsarana ny vola miditra, fampitomboana tombom-barotra, fananam-bolan'ny tompon-trosa ary kapitalin'ny fampiasam-bola sns. CDS Ny premiums dia azo alaina haba (fa ny tahiry trosanao ratsy kosa tsy).
ATAHORAANA NY BUSINESS CREDIT-nao TSY MISY ATAHORANA
Ny CDS dia mamela anao hanitatra ny orinasanao fampindramam-bola nefa tsy misy trangan-trosa (satria nafindranao tamin'ny trosa ny trosa WTE). Na manandrana manitatra ny crédit misy anao amin'ny mpanjifa efa misy ianao na manitatra ny trosa fampindram-bola amin'ny kaonty vaovao, ny fampiasana CDS hampihenana na hamindrana ny trangan-trosa dia fomba iray lehibe hampitomboana ny orinasa tsy atahorana.
FANAZAVANA azo antoka sy azo antoka ary tombony mihoatra ny 12 volana.
Azonao atao ny mampiasa ny CDS hiantohana ny fidiram-bola azo tombanana sy tombony ho an'ny orinasanao mandritra ny 12 volana ary hamafana ny singa tsy azo antoka, tsy fahombiazana, fivarotana ambany, vola mikarama ambany, tombom-barotra ambany, fatiantoka ara-bola ary risika amin'ny orinasanao.
The WTE CDS dia manome onitra raha misy fatiantoka tsy ampoizina mitranga, ka miaro ny vola miditra, ny tombom-barotra, ny taratasy fifandanjana ary ny mpiasa amin'ny tranga mety hampidi-doza ara-bola. Noho izany, ny CDS dia mety ho fampiasam-bola hendry indrindra azon'ny orinasanao hiantohana ny fiarovana ny tombom-barotra, ny fikorianan'ny vola, ny renivohitra ary ny asany.
Vahaolana ny olan'ny ASETS tsy tanterahina 24 ora.
Orinasa mitombo isa sy mpindrana tsirairay manerantany no tsy afaka mamerina ny trosany na tsy afaka mandoa zanabola noho ny fanakorontanana entin'ny covid.
Noho izany, ny banky sy ny andrim-panjakana manerantany dia manohy miatrika fiakarana marim-pototra amin'ny fampindramambola tsy manatanteraka (NPL). Ny famahana ny fanararaotana ny fananan-tany tsy fanatanterahana (NPA) no fanamby lehibe atrehin'ireo ankamaroan'ireo mpampindram-bola tamin'ny 2021, satria ny fihenan'ny fampindramam-bola, ny famerenana ny trosa ary ny fatiantoka avo lenta dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fividianana vola, ny vola miditra, ny tombom-barotra. , renivohitra, sy ny taratasy fandanjana.
Miaraka amin'ny WTE fifanakalozana default amin'ny crédit, azonao atao ny manafoana ny trangan-trosa amin'ny portfolio-nao, manafoana ny fampidiran-trosa ary mamaha ny olan'ny fananana tsy mahavita ao anatin'ny 24 ora.
INVESTAENT $ 18B natolotra ho an'ny orinasa solika sy gazy
Ho an'ny mpikambana ihany ity serivisy ity!